कोभिड-१९ बारे गलत र भ्रामक दाबी सहितको अन्तर्वार्ता युट्युब ट्रेण्डिङमा - South Asia Check
Sanjog Shiwakoti / बिहीबार, भाद्र १८, २०७७
तस्बिर स्राेत : हिमाल अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलको स्क्रिनसट
अमेरिकी अरबपति तथा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले कोभिड-१९ को एकाधिकार (पेटेन्ट राइट) दर्ता गराएको अफवाह केही समययता विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले यसको तथ्य जाँच गरिसकेका छन् । यूएसए टूडेमा मार्च २७ मा प्रकाशित तथ्य जाँच अनुसार बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरेको द पर्ब्राइट इन्स्टिच्युटले कुखुरामा लाग्ने कोरोनाभाइरसको लागि २०१८ मा एकाधिकार लिएको हो तर मान्छेमा लाग्ने कोरोनाभाइरसको लागि बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र द पर्ब्राइट इन्स्टिच्युट दुवैले त्यस्तो अधिकार लिएका छैनन् ।
प्रथमत: बिल गेट्सले उक्त भनाइ सन् २०१५ को टेड टकमा नभई सन् २०१० को टेड टकमा व्यक्त गरेकाे पाइएको छ । बिल गेट्सले दत्तले दाबी गरेजस्ताे १० देखि १५ % जनसंख्या नियन्त्रणका लागि खोप लगाउनुपर्छ भनेका थिएनन् । टेड टकको वेबसाइटमा राखिएको उक्त भिडियोमा उनले भनेका छन्, “विश्वको जनसंख्या अहिले छ अर्ब ८० करोड छ । यो ९ अर्ब पुग्ने दिशातिर अघि बढ्दैछ । यदि हामीले नयाँ खोपहको विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा वास्तवमै ठूलो फड्को मार्न सक्यौं भने त्यसलाई १० देखि १५ प्रतिशतले घटाउन सक्छौं।” यसरी विश्वको जनसंख्या बढ्ने प्रतिशत एकदम धेरै भएकोले जनसंख्या वृद्धिदर १० देखि १५% ले कम गर्नुपर्छ भन्ने खालको गेट्सको भनाइलाई तोडमरोड गरी खाेपसँग जाेडेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
मास्क लगाउनाले हामीले कार्बनडाइअक्साइड लिन्छौं र यसले स्वास्थ्यमा असर पार्छ भन्ने अहिलेसम्म स्थापित नभइसकेको कुरा डाक्टरहरुले बताएका छन् । एड्भोकेट लुथरन जनरल अस्पतालका संक्रामक रोगका निर्देशक डा. रोबर्ट सिट्रोनबर्गले यो एक मिथ्या भएको र मास्क लगाउनाले मानिसले कार्बनडाइअक्साइड लिने र यस्ले हामीलाई हानि गर्ने तथ्यको कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाण नभएको बताएका छन् । संक्रमण रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदीले पनि मास्क लगाउनाले शरीरलाई हानि हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको बताए । “यदि मास्क लगाएर शरीरलाई हानि हुने भएदेखि सबैभन्दा हानि हामी डाक्टरहरुलाई हुनुपर्ने जो बिहानदेखि बेलुकासम्म मास्क लगाएर काम गर्छौं । मुख्य कुरा यस्ता भ्रामक कुरा फैलाउने व्यक्तिलाई सबै जनाले निरुत्साहित गरौं,” डा. सुवेदीले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
“स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेको छ । स्यानिटाइजरमा के के मिलाइन्छ त? त्यसको असर के के छ ? हाम्रो हातको यो ठाउँ सेन्सिटिभ (संवेदनशील) हो । यहाँ धेरै राम्रा कीटाणुहरु हुन्छन्, हाम्रो शरीरलाई बचाउनलाई । स्यानिटाइजर यहाँ हालेपछि त्यो कीटाणु मर्छ कि बाँच्छ के गर्छ भन्ने कुरा विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यहरु आइसक्या छ । तेल्ले झन् कमजोर पार्छ ।”
अमेरिकाको अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले पुरुषका लागि दैनिक ९ चम्चा र महिलाका लागि ६ चम्चा (फलफुल र अन्य खानेकुराबाट आउने प्राकृतिक गुलियो बाहेक) सेवन गर्न सिफारिस गरेको छ । केही अध्ययनले अधिक चिनी सेवनले मोटोपन बढ्न गई मधुमेह र मुटुरोग आदि हुने जनाएता पनि शरीरलाई यसले उर्जा दिने भएकाले यसको सीमित मात्रामा सेवन जरुरी हुने जनाएका छन् ।